कवि शोभा सुनुवार (जुलियट)द्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह ‘उरूर’ लोकार्पण कवि शोभा सुनुवार (जुलियट)द्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह ‘उरूर’ लोकार्पण – Akhabar Nepal
कवि शोभा सुनुवार (जुलियट)द्वारा...
२०७५, ६ चैत्र बुधबार ०९:२९
काठमाडौं: कवि शोभा सुनुवार (जुलियट)द्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह ‘उरूर’को लोकार्पण भएको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीको प्रमुख उपस्थितिमा कृति लोकार्पण भएको हो ।
प्रमुख अतिथि अवस्थीले कृतिका बारेमा बोल्दै दुई भाषामा कलम चलाउन सक्नु महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए । नेपालमा भाषाहरूलाई कामकाजको रूपमा लान नसकिएको समस्या डा. अवस्थीले बताए । परिवारमा मात्र बोलिने, परिवार पनि छुटफुट भइरहेको अवस्थाले पनि भाषामा समस्या पर्दै जानु प्रमुख कारण रहेको उनको भनाई थियो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निवर्तमान मातृभाषा विभाग प्रमुख प्राज्ञ श्रवण मुकारुङ कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा उपस्थित भएका थिए । मुकारुङले लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा नेपाली भाषामा दश प्रतिशत भाषाभाषीबाट आएका शब्दहरू रहेका छन्, त्यसैले सम्बृद्ध नेपाली भाषा बनाउन मातृभाषाको संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताए ।
कवि शोभा सुनुवारको ‘उरुर’लाई ‘भाषाको लागि साहित्य’ अभियान चलाउँदै आएको चुप्लु समाजले प्रकाशन गरेको हो । सुनुवार सेवा समाज संघीयका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारको सभापतित्व कृति लोकार्पणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।